Semalt: किन ताजा सामग्री तपाइँको वेबसाइट र SEO को लागी महत्त्वपूर्ण छ
वास्तवमा, खोजी ईन्जिनहरूले वेबसाइटहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। अधिकांश खोज इञ्जिनहरूले सामग्रीको गुणवत्ता र आवधिकता अपडेटमा जोड दिदैछन्। यसैले, सान्दर्भिक रहन, तपाइँ तपाइँको सामग्री बारम्बार अपडेट गर्नु पर्छ। जुलिया वाश्नेभा, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, नयाँ वेबसाइट किन तपाईंको वेबसाइटको सफलताको कारण प्रमुख कारक हो भनेर व्याख्या गर्दछ।
१. खोजी ईन्जिनहरू द्वारा लगातार क्रोलि।
यदि तपाइँको वेबसाइट नियमित रूप मा नयाँ लेख र वेबपेजहरु को साथ अपडेट गरीएको छ भने, तब खोज इञ्जिन क्रोलरहरूले प्राय: त्यस साइटको भ्रमण गर्नेछन्। यसको मतलव तपाईको साइटको अनुक्रमणिका द्रुत गतिमा चल्नेछ। जब खोजी ईन्जिनहरूले तपाइँको साइट नियमित भ्रमण गर्दछ, तपाइँ उच्च सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँको सामग्री मूल्यवान छ भने। जब तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा नया सामग्री जोड्नु हुन्छ, खोज इञ्जिनहरु को लागी नोट गरीएको छ र तपाइँको साइट को रैंकिंग को पुन: व्यवस्था। त्यसोभए, उच्च रैंकिंग पाउने संभावनाहरू वृद्धि गर्न नियमित रूपमा तपाइँको वेबसाइट अपडेट गर्नुहोस्।
२. वेबसाइट प्राधिकरण क्षमता बढाउनुहोस्
तपाईंको वेबसाइटको अधिकार बढाउनको लागि कुञ्जी रणनीतिले थप सामग्री सिर्जना गर्दैछ। अधिक मूल्यवान, अप-टु-डेट सामग्री प्रकाशित गर्नुहोस्, र तपाइँ निश्चित रूपमा तपाइँको साइटलाई अधिक अधिकार क्षमता दिनुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो आलामा प्राधिकरण साइटहरूको समीक्षा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि तिनीहरूसँग हजारौं पृष्ठहरू छन् जुन गुगल द्वारा अनुक्रमणिका हुन्छन्। यदि तपाईं तिनीहरूको लिगमा सम्मिलित हुन कटिबद्ध हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले थप सान्दर्भिक सामग्री प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं कुनै विशेष शीर्षकमा बढि सामग्री लेख्न लगातार हुनुहुन्छ भने, तपाईं व्यक्ति र खोज इन्जिनहरूबाट विश्वास कमाउनुहुनेछ। तपाईंको साइटको अधिकार स्कोर बढ्नेछ किनकि तपाईं अधिक र अधिक विश्वस्त हुनुहुनेछ। सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू र फोरमहरूमा सक्रिय भएर तपाईंको प्रतिष्ठा बनाउनुहोस्।
More. थप सामग्रीले अधिक कुञ्जी शव्दहरू बुझाउँदछ
जब तपाईं नियमित रूपमा नयाँ सामग्री सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईंको साइटमा धेरै कुञ्जी शब्दहरू हुनेछन्। कीवर्ड फोकस गरिएका लेखहरू सिर्जना गरेर, तपाईंसँग बढि आगन्तुकहरूलाई लक्षित गर्ने अवसर हुनेछ। खोज ईन्जिनहरूले तपाइँको साइटलाई पहिचान गर्दछ र तपाइँलाई अधिक आगन्तुकहरू पठाउँदछ। जे होस् Google ले तपाइँको वेबसाइटमा कुञ्जी शव्दहरूको स on्ख्यामा धेरै तौलको आधार दिदैन, यो अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ किवर्डहरू तपाइँको लेखमा र यसका वरिपरि। कुञ्जी शव्दहरू खोज ईन्जिनहरूले विषयवस्तुको आधारमा तपाईंको साइटलाई अनुक्रमणिका गर्न प्रयोग गर्दछन्। याद गर्नुहोस् तपाईको लेखलाई कुञ्जी शव्दहरूसँग नराख्नुहोस् किनभने यसले खोज ईन्जिनहरूलाई दण्ड लगाउँदछ।
Your. तपाईका पाठकहरुलाई सूचित राख्नुहोस्
नियमित अपडेटहरूले तपाईंको सदस्यताहरू र आगन्तुकहरूलाई अप-टु-डेट घटना र तपाईंको उद्योगमा हुने परिवर्तनहरूको साथ राख्दछ। ताजा सामग्रीसँग नयाँ आगन्तुकलाई ग्राहकमा रूपान्तरण गर्ने शक्ति छ। नयाँ जानकारी बारम्बार प्रकाशित गरेर, तपाइँ तपाइँको श्रोतालाई व्यस्त राख्नुहुनेछ। यसले तपाईंको ग्राहकहरूबाट दीर्घकालीन वफादारी कमाउनेछ, र यसरी तपाईंको साइट लोकप्रियता र रैंकिंगमा बढ्नेछ। तपाइँको आगन्तुकहरु लाई तपाइँको उत्पादनहरु र सेवाहरु को बारे मा निश्चित जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। तपाईंको आगन्तुकहरूलाई तपाईंको उत्पादनहरूको फाइदाको बारेमा बताउनुहोस् र तिनीहरूलाई किन तिनीहरूलाई आवश्यक छ। जब तपाईं सम्भावित ग्राहकहरूलाई पर्याप्त जानकारी प्रदान गर्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई सही छनौट गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ, र सम्भवतः तिनीहरूले तपाईंको उत्पादनहरू किन्नेछन्।